155M ~ 6G Warshad Taxane | Shiinaha 155M ~ 6G Soosaarayaasha Taxanaha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 20km DDM Simplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
100Gb / s CFP4 waxaa loogu talagalay 100GBASE-SR4 Ethernet. Waxay u hoggaansamayaan CFP4 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-SR4 iyo CAUI-4, iyo OIF CEI-28G-VSR .. Qalabka wax lagu wareejiyo ee indhaha ayaa u hoggaansamaya shuruudaha RoHS.
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 40km DDM Simplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyeyaasha ayaa loogu talagalay Fast Ethernet, SDH / SONET, Codsiga Codsiga WDM. Qalabka transceiver wuxuu waafaqsan yahay IEEE802.3Z iyo SFF-8472. Waxay ku habboon tahay shuruudaha RoHS.
155Mb / s SFP 1310nm / 1550nm 80km DDM Simplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
155Mb / s SFP CWDM 80km DDM Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyeyaasha ayaa loogu talagalay SONET, SDH, Codsiga Xiriirrada kale ee indhaha. Qalabka transceiver wuxuu waafaqsan yahay IEEE802.3Z iyo SFF-8472. Waxay ku habboon tahay shuruudaha RoHS.
155Mbps SFP 1310nm 20km DDM Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyayaasha ayaa loogu talagalay SONET, SDH iyo codsiyada iskuxirayaasha indhaha. Module-gudbiyaha wuxuu waafaqsan yahay IEC60825-1 iyo SFF-8472. Waxay ku habboon tahay shuruudaha RoHS.
6Gb / s SFP + 1310nm 10km DDM DFB Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
6Gb / s SFP + 1310nm 20km DDM DFB Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
6Gb / s SFP + 1310nm 40km DDM DFB Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
6Gb / s SFP + 1310nm 70km DDM DFB Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
6Gb / s SFP + 1310nm 2km DDM FP Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
6Gb / s SFP + 850nm 300m DDM VCSEL Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyayaasha ayaa loogu talagalay Metro / Access Networks, Fiber Channel iyo codsiga CPRI. Module-wareejiyaha wuxuu u hoggaansamayaa SFP + Heshiiska Meelo Badan (MSA) oo ku habboon shuruudaha RoHS
6Gb / s SFP + CWDM 80km DDM DFB Duplex LC qalabka wax lagu wareejiyo
Wareejiyeyaasha ayaa loogu talagalay shabakadaha aagga kaydinta xawaaraha sare, Kutlada kumbuyuutarka iskutallaabta, isku xidhka OBSAI, interface CPRI, Tuubooyinka xogta xawaaraha sare leh iyo Xiriirinta Inter Rack. Module-wareejiyaha wuxuu u hoggaansamayaa SFP + Heshiiska Multi-Source (MSA) oo wuxuu ku habboon yahay shuruudaha RoHS.